China 1000KW ubukhulu bepayipi yokuvelisa ityhubhu- Uhlobo loqhakamshelwano lohlobo lweSolid state high frequency welder mveliso kunye nabenzi | Mingshuo
I-1000KW yemigca emikhulu yemveliso yetyhubhu yokuvelisa ityhubhu- Uhlobo loqhagamshelo lwesimo seWidder ephezulu ye-welder
Akukho sidingo sokongeza inyathelo lokunyusa / lokunyathela uguquko kwisilungiso kwisiphelo sokufaka somatshini wokuwelda ohamba ngesantya esiphezulu. Xa kuthelekiswa nomshini wokutshiza ityhubhu yokuhambisa umbane okanye umatshini wokuwelda oqinileyo ohambelana nomgangatho ophezulu, unefuthe lokugcina amandla elicacayo (xa kuthelekiswa nomatshini wokuhambisa umbhobho wombane, kwinqanaba elifanayo). Phantsi kweemeko zokuwelda, ukonga umbane ≥30%).
Imveliso Ukwaziswa kweCarbon yentsimbi ityhubhu yokugaya imeko eqinileyo yewelding ephezulu
Ikhabhinethi yokutshintsha kunye nomlungisi ziyilelwe ngokudibeneyo, ezingagqibi kuphela umsebenzi wekhabhinethi yokutshintsha, kodwa ikwanomsebenzi wokulawula ukulungiswa komatshini wokuwelda oqinileyo osisigxina, ekwabizwa ngokuba ngumatshini wokuwelda we-thyristor (SCR);
Imveliso Ipharamitha (imigaqo) ye 1000kw ukuwelda umatshini apho Steel ukwenza umatshini ityhubhu lokusila intsimbi isikwere kumbhobho wokwenza umatshini intsimbi umbhobho wokwenza umatshini
Imveliso amandla 1000kw
Ixabiso leVoltage 450V
Inqanaba langoku 2500A
Ubuninzi boYilo 150 ~ 250kHz
Uluhlu oluphakanyisiweyo lweemibhobho ezinokufakelwa nge-1000kw enkulu enkulu yokwenza umatshini wokwenza ityhubhu
Izinto Pipe ikhabhoni yesinyithi
Umbhobho 165-508 mm
Udonga lombhobho ubukhulu 5.0-12.0 mm
Iwelding Mode Uhlobo lokunxibelelana / lwentlobo ezimbini zoMatshini oSebenzayo weSinyithi oPhakamileyo oQhelekileyo
Indlela yokupholisa Sebenzisa inkqubo epholileyo yamanzi-Amanzi ukupholisa uhlobo lokungenisa i-1000kw imeko eqinileyo yesinyithi eshushu
Iinkcukacha zemveliso yenqanaba lesithathu elomeleleyo lesinyithi
Inkqubo yolawulo lwedijithali yonke
Isilungisi se-1.3-D samkela ukusebenza kweendleko eziphezulu ze-MCU ukulawula ukuqonda ngokuthe ngqo ukuhambelana kokulawula kunye nolawulo oluncinci kunye necala elincinci legridi elingelilo uphawu.
2.I-inverter eguqukayo yamkela i-CPLD ukuba yenze inkqubo yolawulo lwedijithali epheleleyo ebonakala nge-engile yazo eqhubekayo, inqanaba eliphezulu lokutshixa kunye nobubanzi bendawo yokukhiya.
Uyilo oluqhelekileyo. ungenziwa ngemfuneko ngokwendlela igridi yomsebenzisi, imfuneko technics kunye nokusebenza frequency.
Isantya iwelding isekelwe kwimeko max OD kunye ubukhulu eludongeni ubukhulu.
Uyilo ngokubanzi, lunokuyilwa ngokweetekhnoloji zomsebenzisi.
Egqithileyo Ukusebenza okuphezulu kwe-China okwenziwe ngokuqinileyo H-Beam hf induction welder 1000kw umatshini wokuwelda
Okulandelayo: Umatshini wokuvelisa ityhubhu yentsimbi encinci ye-100KW Yonke ikhabethe enye igbt hf welder
Uluhlu lwe-300KW yoQhagamshelo lweMOSFET IGBT Idityanisiwe ...
Uqhagamshelo lwe-500KW Series eyahluliweyo i-SCR eqinileyo ...